Famatsiana herinaratra : miara-miasa ny Fluidic amerikanina sy Henri Fraise | NewsMada
Famatsiana herinaratra : miara-miasa ny Fluidic amerikanina sy Henri Fraise
Par Taratra sur 15/09/2017
Vonona i Etazonia hanampy an’i Madagasikara eo amin’ny famatsiana herinaratra. Nisy, araka izany, ny fifanarahana eo amin’i Etazonia sy ny minisiteran’ny Angovo sy ny rano, omaly, momba ny angovo azo havaozina. Miara-miasa amin’izany ny sehatra tsy miankina.
Saika manenika an’i Madagasikara sy ny tapany atsimon’i Afrika ny tsy fahampian’ny fotodrafitrasa famokarana herinaratra. Nosoritan’ny Amerikanina fa manana ny sandany lafo mampiakatra ny toekarena ny fisian’ny rafitra azo antoka ho an’ny angovo, izay omen’ny fanjakana amerikanina ny toerany amin’ny fiaraha-miasa eto Madagasikara sy Afrika, hatramin’ny nanaovana ny Power Africa, efa-taona izao. Tanjona amin’ny Power Africa ny hanampy hatramin’ny 30.000 Mw ny famatsiana herinaratra ho an’ny mponina 60 tapitrisa amin’ny taona 2030.
Koa vita sonia ny fifanarahana eo amin’ny Biraon’ny fanjakana amerikanina na ny USTDA* sy ny orinasa Henri Fraise. Atao amin’izany ny fananganana tambajotra madinika mpamokatra sy mpitsinjara herinaratra, indrindra any ambanivohitra. Tsiahivina fa mbola 15 % ihany ny Malagasy manana herinaratra hatreto. “Mankasitraka izao fanohanan’ny Amerikanina amin’ny alalan’ny orinasa Fluidic any Arizona izao izahay, hametrahana famokarana herinaratra avy amin’ny masoandro, ny fitahirizana izany anaty vatoaratra ary fitsinjarana azy”, hoy ny filoha lefitry ny Henri Fraise, Nicolas Verbert.
“Mahafaly anay ny miara-miasa amin’ny Henri Fraise hametraka ireo tambajotra ireo, araka ny fandaharanasan’ny governemanta malagasy momba ny fitrandrahana angovo azo havaozina, indrindra hampandroso ny any ambanivohitra”, hoy kosa ny filoha lefitry ny Fluidic, Richard Hallas.
Azo tanterahina tsara ny tetikasa toy izao eto Madagasikara. Fototra iorenan’ny toekarena maharitra lovain-jafy izany sy manamora ny fisintonana ireo mpampiasa volo any amina sehatra hafa.
USTDA* : US Trade and development agency